Alefaso amin'ny alàlan'ny ScienceOpen - AfricaArXiv
Alefaso amin'ny alàlan'ny ScienceOpen
Mandehana any amin'ny scienceopen.com/collection/africarxiv/…/submit
> Midira amin'ny ORCID
> ampidiro ny sora-tànanao
> VITA 🙂
Azafady mba vakio ny torolalantsika alohan'ny hanateranao, avereno fa hanaraka ny lisitry ny lisitry ny taratasim-bola ianao ary manolotra ireo fampahalalana ilaina rehetra ao amin'ny sora-tananao.
Ampidiro ao amin'ny sora-tananao ny fandikana ny lohateny, ny abstract / famintinana ary ny teny lakile amin'ny fiteny afrikanina nentim-paharazana sy / na fiteny hafa ankoatry ny iray izay ampidirinao (oh: English <> French <> Arab <> Portuguese). Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahasamihafana amin'ny fiteny amin'ny siansa dia mankanesa any https://info.africarxiv.org/languages/.
Ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa AfricaArXiv dia hanamarina ny fandefasana ireo fepetra ara-dalàna araka ny voalaza ao amin'ny 'lisitra fandefasana sora-tanana '.
Raha nankatoavin'ny sora-tanana nataonao dia halefa ao amin'ny ScienceOpen Collection izany AfricaArXiv Preprints miaraka amina Crossref DOI ary CC BY 4.0 licence licence.
Afaka manasa mpikaroka hafa ao amin'ny sahaninao ianao hanoratra tatitra Open Peer Review.
Raha misy fanontaniana dia andefaso mailaka izahay info@africarxiv.org.
Momba ny ScienceOpen
ScienceOpen dia tambajotra maimaimpoana izay manome valisoa sy mandrisika ny fampiharana ny Open Science. Amin'ny sehatra ScienceOpen azonao atao:
Mikaroka ary mikaroka fikarohana mifandraika
Zarao ny fahaizany ary mahazo trosa amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny na manadihady momba ny lahatsoratra ny mpiara-mianatra
Ampiharo mba ho a Mpanonta famoriam-bola ary ampidiro mialoha ny sehatry ny fikarohana ataonao
Aorian'ny fisoratana anarana dia azonao atao ny mampiasa ny fitaovam-pifandraisana rehetra hita ao amin'ny ScienceOpen - maimaim-poana. Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa ianao ary hisoratra anarana ao amin'ny scienceopen.com.
Votoatiny mifantoka kokoa amin'i Afrika amin'ny ScienceOpen
Azo alaina ao kumu.io/a2p/african-digital-research-repositories#institutional/scienceopen
Avy amin'ny 'Vaovao' faritra
Johanssen Obanda	 25 Janoary 2021	 No Comments
Ny repository mpiara-miasa amintsika ScienceOpen dia niara-niasa tamin'ny University of South Africa (UNISA) Press hamorona ny serivisy fanontana UnisaRxiv. UnisaRxiv dia ho forum…
Fiaraha-miasa stratejika amin'ny ScienceOpen
Jo Havemann	 27 Janoary 2020	 1 Comment
Miara-miasa ny ScienceOpen sy ny AfricaArXiv hanome ny mpikaroka afrikanina fahitana haingana, tambajotra ary fiaraha-miasa. Ny sehatra fikarohana sy famoahana ScienceOpen dia manome serivisy sy fiasa…
Mizahà amin'ny alàlan'ny AfricaArXiv ao amin'ny ScienceOpen
Azo alaina ao scienceopen.com/collection/africarxiv